Iza amintsika no tsy te haka tahaka ny zaza madinika? Azo antoka fa maro no mbola mahatsiaro ny fihetseham-ponao tsy hay hadinoina rehefa misy fahagagana kely mahatsapa ny marina eo amin'ny tanana, ary ny clim of plasticine dia mitodika amin'ny endriky ny lehilahy na biby. Ny famerenana ny manga ho an'ny olon-dehibe dia mora tsotra izao, tsy maintsy ilaina ihany ny mamolavola fomba tsotra amin'ny fanaovana sary sokitra avy amin'ny tanimanga polymère. Ary mba hahatonga izany dingana tena mora sy mahafinaritra izany, dia mila fitaovana fanodinana manokana ianao hiasa amin'ny tanimanga polymère.
Kitapom-bary ho an'ny tanimanga ara-paty - inona no atao?
Toy ny amin'ny toe-javatra hafa, rehefa miasa amin'ny tanimanga ara-poty, dia sarotra ho an'ny vao tonga saina ny mahatakatra hoe inona no fitaovana sy fitaovana tokony hividianina aloha, ary azo atao tsara ny miandry. Noho izany dia asiantsika izy ireo araka ny ilàna azy:
Substrate . Amin'ny maha-fotodrazana azy dia azo ampiasaina avokoa ny sanda rehetra misy tsangam-bato. Ohatra, kitapo plastika plastika, kilaoty ary taratasy vita taratasy. Nefa ny hazo ho an'ireny tanjona ireny dia tsy mifanentana amin'ny fomba manokana, satria hitoetra ao amin'ny tanimanga ny tanimbary. Fa ny tena mahasoa indrindra dia mbola misy sariohatra manokana.
Skalka . Tahaka ilay substrate, amin'ny tanimanga polymère voalohany dia azo havaozina amin'ny zavatra mety misy takaitra tsara - tavoahangy glasy, tavoahangy deodorant, sns. Saingy raha efa niampita ny tsipika teo amin'ny fialamboly indray andro sy ny fialam-boly tena izy, dia mendrika hividy pensilihazo misy poizina.
Ny antsy . Mba hanavahana ny singa tsirairay avy dia mila maranitra ianao ary miaraka amin'izay koa ny antsy mahitsy izay tsy handoto ny lamina. Ny sombin-tsoratry ny birao afovoany midadasika no tena mifanaraka amin'izany. Ary mba hahatonga ny sisin-dambany dia afaka mividy kitapo manokana, ampiasaina ho modely mavitrika.
Stacks . Ho an'ny fananganana sary sokitra, mila stacks ianao izay ahafahanao "handoko" amin'ny faritra kely misy tanimanga. Amin'ny toe-javatra sasany dia azo soloana azy ireo amin'ny karaoty mahazatra.
Miora, mari-tsoratra ary lamba taratasy . Ny miora vita amin'ny bobongolo silikana dia tsy azo soloina tsotra izao rehefa misy ilàna hamorona singa mitovy. Ny stamps sy mats dia mamela anao hanome endrika na endrika tsy mahazatra.
Extruder . Ny tsipaipaika manokana dia ahafahanao mahazo loko mahavariana mahaliana, amin'ny fanosehana tanimanga amin'ny alàlan'ny endritsary samihafa.
Inona no fahasamihafana misy eo amin'ny ultrabook sy ny solosaina finday?
Sokitra misy fanamafisam-peo
Tsy misy ranomandry - inona ity?
Sakafom-pihinana sakafo tsy misy sakantsakana
Ahoana ny fifandraisana amin'ny telefaona?
Solomaso divay ho an'ny divay mena
Inona no karazana madio kokoa ho fanatsaràna ny trano tsara kokoa?
TV any an-dakozia - ahoana ny fisafidianana ny tsara?
Andipal - famantarana ny fampiasana
Mom Emily Ratjakovski dia afaka mifaninana amin'ny zanany vavy ho tsara tarehy
Ny alika fara-tampony eto amin'izao tontolo izao
Endrey ny hafanana amin'ny kisoa any anaty lasitra?
Antibiotika amin'ny akne
Afida amin'ny hazo fihinam-boa
Nifidy an'i Leah Michel i Zac Efron malala
Ny holatra eo amin'ny rindrina - fitaovana inona no mahomby indrindra?
Pamela Anderson dia nanazava tamim-pitandremana ny henatra teo amin'ny zanany lahy sy ny vadiny taloha
Fomba ahoana no hanesorana ny tavy amin'ny vavony?
Kabinosy kely ao amin'ny efitra fandraisam-bahiny
Ny asa ambony ambany indrindra
Hazo fanondrahana sy Banana Pie
Ny renim-pianakaviana sy ny renibeny - ireo toetra amam-panahy sy ny fanoherana
Ahoana ny fomba hanesorana ny loko amin'ny pataloha?
Apple cider ao an-trano - tsotsotra tsotra
Ice Palace any Brest